Chikamu 1: Kuzvarwa patsva nemvura noMweya
Sei Mwanakomana waMwari akava munhu?
Ndeipi Mitemo Yakadzikwa Namwari?
Tinofanira Kutenda Muna Jesu Here?
Isu Vatenderi Tinogona Kuve Vatadzi Zvakare Here?
Munamato Yerupinduko Ingashambidza Zvitadzo Zvedu?
VaRoma 8:30 inotaura kuti, “akadaidza vaya vakasarudzwa, uye vanhu vaya vakada idzira ndivo vakatsaurwa, uye vanhu vaya vakadaidzwa ndivo vakaruramisa uyezve vaya vakaruramisa ndivo vachagoveranawo naye mbiri yake.” Zvino ndima iyi inotsigira kutendera kwekuwedzera kwezvekuchenurwa here?
Kureurura Zvitadzo Zvedu Kungaita Kuti Zvibvisike Here?
Vhangeri Rechokwadi Chinyi?
Sei Jesu Akazvipira Pachake Pamuchinjikwa?
Mupiro Wekuwadzaniswa Kwezvitadzo Zvezuva Nezuva Waiva Chinyi Mutesitamende Yekare?
Chinyi Chainzi Mupiro Wekuwadzaniswa Wezvitadzo Zvegore Mutesitamende Yekare?
Mupiro Wekuregererwa Zvachose Waiva Chinyi?
Kuregererwa Kwezvitadzo Kunoitwa Kamwechete Here Kana Kuti Nguva Nenguva?
Mubairo Wechivi Chinyi?
Sei Jesu Aifanira Kufira Pamuchinjikwa?
Tinowanei Kana Tichitenda Muna Jesu?
Sei Tichifanira Kutenda Muna Jesu?
Chii Chinonzi Kereke Rechokwadi Ramwari?
MuHedheni ndiani muBhaibheri?
Munganditaurirawo here nezvedzidziso iri pakati pahukama hwekubhabhatidzwa kwedu, nekubhabhatidzwa nerufu, uye nokumuka kwaJesu?
Ko ndingati ‘ndakarurama’ sei ini ndichingotadza zuva nezuva?
Rubhabhatidzo rwerupinduko rwaishambadzwa naJohane chii?
Haufungi here kuti kunzwisisa rubhabhatidzo rwaJesu sechimanikidziro chokuwana ruponeso zvinobvisa kukosha kwerufu rwaJesu pamuchinjikwa kuri muvhangeri?
Mungandipawo here tsanangudzo yezvevhangeri remvura uye nemweya?
Zvinyorwa zvipi zvinopa umboo hwekuti “Vapositora vainyanya kujekesa pfungwa dzekubhabhatidzwa kwaJesu?”
Kureva here kuti zvandakatenda kare uye nokudzidzisa zvinongova zvokuwedzera tsinhiro yenyu pane kubhabhatidzwa kuri kufuratirwa kwaJesu nevanhu. Zvino kana zvakadaro musiyano wevhangeri remvura nemweya uri papi?
Ndotenda here murubhabhatidzo rwake pamwechete nepamuchinjikwa wake kuti ndiponeswe?
Kana kunzwisisa kwenyu “mumvura uye nemweya” kwaiva iko chaiko kwechokwadi, kureva kuti ruponeso dai rusina kuwanikwa nembavha yaiva pamuchinjikwa yakaregererwa panguva dikidiki nomutemo kurevaka kuti Mwari haana kushandisa ruenzaniso chairwo, nokuti akaputsa mutemo wake oga wokupinda muumambo. Mungatsanangurawo here ruponeso rwembavha iyo pamuchinjikwa?
Sezvo Mwari ane nyasha netsitsi, haagoni kungotiita vakarurama here nyangwe tine zvitadzo mumwoyo yedu nokuti tinongotenda chete muna Jesu?
Kana tichiti Jesu akabvisa zvitadzo zvose zvakare, zvanhasi, uye nezvamangwana sokutaura kwenyu. Ko remangwana romunhu ringava rakadii kana achiramba achitadza achifunga kuti zvitadzo zvake zvakaregererwa uye nokukangwanwira nokutenda mukubhabhatidzwa kwaJesu nemuchinjikwa wake?
Chikamu 2: Mweya Mutsvene
Ko ichokwadi chomene here kuti Mweya Mutsvene haagari matiri kwenguva yakati kuti kudzamara tapupura zvivi zvedu, uye tave nokuregererwa pazviri?
Ko Mweya Mutsvene anove nokugara mukati memunhu akazvarwa patsva nguva dzose here kana achidavira kuevhangeri yemvura noMweya; kana kuti, Mweya Mutsvene anopapama achitenderera pavari, achiva nokuzouya mukati mavo, nguva dzose apo vanokumbira rubatsiro?
Ko Mweya Mutsvene anova nokuuya pamusoro pemunhu, zvamazvirokwazvo here, kana badzi ave nokuzvarwa patsva nemvura noMweya?
Saka ndeupi musiyano uripo pakati poMweya Mutsvene uyo akabata zvakasimba panguva yekereke yokuvambira neuyo ari kuita zviratidzo zvenguva ino? Ko Mwari haasati ariye here asingashanduke zuro, nanhasi, nokusingaperi?
Ko Mweya Mutsvene anove nokuita zvipi panguva dzino?
Ko kutaura nendimi haisi fakazo yekugara kweMweya Mutsvene here? Zvimwe tingazogona sei kuziva kana achigara matiri?
Ko vadzidzi vaJesu vakave nokugamuchira Mweya Mutsvene kuburikidza nokudzikinurwa pazvivi zvavo, kuburikidza nokuregererwa kwezvivi here, kana kuti yaive imwevo shwiro yakapatsanurika isinei nechokuita nekuregererwa kwezvivi?
Ko zvinorevei kuti kugamuchira rubhapatidzo rwoMweya Mutsvene?
Ko Mweya Mutsvene unoratidzika zvakasiyana sei muTestamente Yakare neItsva?
Chikamu 4: Mibvunzo Inowanzobvunzwa kubva Kuvaverengi Vemabhuku Edu
Makanyora mubhuku renyu kuti tinokwanisa kugamuchira kuregererwa kwezvivi, zvachose, kuburikidza nokutenda mukubhapatidzwa kwaJesu uye nemuropa rake rakadeuka paMuchinjikwa. Zvino, rugwaro urwu, urwo rwuri muMunyengetero waShe, mungarwutsanangura sei, “Mutikanganwire mhosva dzedu, sezvatinokanganwiravo vane mhosva nesu?”
Makanyora muchiti, “Tinogona kuva tisina zvivi zvachose kana tichitenda kuevhangeri yemvura noMweya mumoyo yedu.”Asi Bhaibheri rinotaura kuti, “Kana tichiti, hatinezvivi, tinozvinyengera, zvokwadi haizi matiri. Kana tichizvirevurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kose. Kana tichiti, hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri” (1 Johane 1:8-10).
Munodudzira ndima iyi sei? Ko, ndima iyi hairevi here kuti tiri vatadzi kudzamara tafa, uye kuti tinofanira kuita minyengetero yokuregererwa kuti tiregererwe zvivi zvedu zvezuva rimwe nerimwe?
Makadudza imi kuti kubhapatidzwa zvinoreva kuti “kutambidza zvivi.” Kureva kwenyu uku kune dzambiro inobva muBhaibheri here?
Makataura kuti, Jesu wakatora zvivi zvose zvenyika, zvamazvirokwazvo, apo akabhapatidzwa naJohane.
Zvino, zvinorevaka kuti akaita mutadzi panguva yose yepavupenyu hwake hwaakabatira muvanhu; hazvirevi kudaro here?
Ko, munhu wakaponeswa unogara akangoponeswa nokusingaperi here?
Ndinoziva, kuburikidza nedzidziso dzenyu, kuti rubhapatidzo rwaJesu rwakanga rwakafanira zvikuru pakuponeswa kwedu. Zvino, ko rubhapatidzo rwemvura rwevatendi munorwutora sei? Rwakafaniravo here kumutsvene wose? Zvakare, handina ruzivo nezvemufundusi akazvarwa patsva, munharaunda yandinogara, uyo angakwanisa kundibhapatidza.
Munoshandisa chirevo chakatsarukana chokuti “evhangeri yemvura noMweya,” icho chandisati ndambonzwa nezvacho. Chirevo chokuti “evhangeri yemvura noMweya ichi” chinobva papi?
Ko, gehena ririko zvamazvirokwazvo here?
Mungandidudziriravo here zvinoreva chikamu chokutanga chaVaHeberu chaputa 6?
Ko zvinorevei kuti “kana tichitadza nobgoni kana tambogamuchira zivo yezvokwadi, hakuchinechibairo pamusoro pezvivi”?
Ko, hamufungi here kuti zvinokwanisa kuita kuti munhu ararame vupenyu bgekushaya hanya, uye kuti atoramba achirarama muzvivi, nokuda kwekuti Jesu wakatozviripira nechekare, (zvivi) zvaikezvino, nezvakare, nezveramangwana?
Ko munofunga kuti kudini pamusoro pezviratidzo zvechiKristu chanhasi? Ini ndinofunga kuti Mweya Mutsvene achiri kushanda mukereke yaMwari.
Ndapota nditumidzireivo kopi yechirevo chenyu chekutenda.